Qareeno Caalami ah oo Kenya u kireysatay Dacwada Badda | KEYDMEDIA ONLINE
Koox qareenno ah oo ka kooban 8 ayay Kenya u diyaarisay inay ku matalaan
NAIROBI, Kenya - Qareenada ayaa ka kooban 8, kuwaasoo kasoo jeeda dalalka reer galbeedka oo UK ay kamid tahay, waxayna isku diyaarinayaan inay Kenya ku difaacaan Maxkamadda ICJ oo 15-ka March 2021 dhageysanaysa dacawadda muranka badda oo Soomaaliya 2014 u gudbisay.
Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law ayaa hogaaminaya kooxda sharci-yaqaanada oo ku jiro Justice Tullion Treves, oo hore u ahaan jiray garsoore maxkamada caalamiga ah ee sharciga badaha.
Justice Treves ayaa sidoo kale ka soo muuqday Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) oo ka aqyeb qaatay doodo la xiriirra kiis lamid ah midka u dhaxeeya Soomalaiya iyo Kenya, oo isku haysteen Peru iyo Chile.
Prof Phoebe Okowa, oo bare ka ah Sharciga Caalamiga ee Jaamacadda Queen Mary ee London ayaa ah qofka kaliya ee Kenyanka ah. Waxay qeyb ka aheyd dacwada badda ee Gambia ka gudbisay Myanmar. Iyadu waa arday ka qalin jabisay Jaamacadda Nairobi oo ay ka gaartay darajooyinka heerka koowaad.
Sidoo kale, kooxda waxaa ku jira Prof Makane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo sharciga caalamiga ka dhiga Jaamacadda Geneva.
Kooxda ayaa badashay qareenadii hore, oo kala ah Karim Khan, Payam Akhavan (American), Makena Muchiri (Kenya), Vaughan Lowe QC (British), Alan Boyle (British), Mathias Forteau (French) iyo Amy Sanders (British).
Si kastaba ha noqotee, 2014, Soomaaliya waxay dacwad ka gudbisay Kenya taasoo u dirtay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee ICJ, oo saddex jeer dib u dhigtay dhageysiga.
Muranka Badda wuxuu sababay inuu xumaado xiriirka labada dalka ee deriska ah, iyadoo dowladda Federaalka ay sheegtay inay Kenya kusoo xad-gudubtay madax-banaanida dhuleed iyo mida siyaasadeed ee dalka.